Hurumende yeUK: danho rekutyisidzira kwehugandanga 'rakaoma' izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Hurumende yeUK: danho rekutyisidzira kwehugandanga 'rakaoma' izvozvi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Hurumende yeUK: nhanho yekutyisidzira kwehugandanga ikozvino 'yakaoma'
Sarudzo yehurumende yeUK yekusimudza danho rekutyisidzira kwehugandanga yaive yekupindura bhomba reSvondo reLiverpool, iro mapurisa akazivisa kurwisa kwehugandanga.
Iyo UK yakambosimudza danho rayo rekutyisidzira kuti 'rakaoma' muna Mbudzi 2020 mushure mekurwiswa kwakatevedzana muEurope.
UK yekutyisidzira kwehugandanga level yakaderedzwa kusvika 'yakakura' muna Kukadzi zvichitevera 'kudzikisira kwakanyanya' kwezviitiko.
Kuwedzera kwazvino mukuchenjerera kuyerwa kwakakonzerwa nekuti chirongwa chebhomba chiri chiitiko chechipiri mumwedzi.
Mushure mekunge Mutungamiriri Boris Johnson atungamira musangano wechimbichimbi weCabinet Office Briefing Room (COBR), hurumende yeBritain yakazivisa kuti danho rekutyisidzira kwehugandanga munyika rasimudzwa kusvika 'rakaoma.'
'Zvakaoma' danho rekutyisidzira kwehugandanga zvinoreva kuti kumwe kurwiswa kunoonekwa se'kungangoita.'
Sarudzo, iyo yakasimbiswa na Munyori Wezvemukati menyika Priti Patel, yakatorwa Joint Terrorism Analysis Center (JTAC) - boka revanorwisa-magandanga nyanzvi kubva kumatare edzimhosva uye masangano ekuchengetedza ayo ari kumuzinda weMI5 kuLondon.
Patel akati kuwedzera kwekuchenjerera kwakakonzerwa nekuronga kwebhomba "chiitiko chechipiri mumwedzi." Angangove achireva kuuraya nebanga kwaTory MP David Amess mwedzi wapfuura, iyo yakambonzi kurwisa kwehugandanga nemapurisa.
“Pane ongororo yakaitwa iye zvino; vachada nguva, nzvimbo, kuita basa ravari kuita maererano nekuferefeta chiitiko ichi,” Patel akadaro, achiwedzera kuti hurumende iri “kuona kuti tiri kutora matanho anodiwa.”
Iyo UK yakambosimudza danho rayo rekutyisidzira kusvika "rakaoma" muna Mbudzi 2020 mushure mekurwiswa kwakatevedzana muEurope. Yakaderedzwa kusvika 'yakakura' muna Kukadzi zvichitevera 'kudzikiswa kwakanyanya' kwezviitiko. Iyo 'yakaoma' nhanho ndiyo yechipiri-yepamusoro-soro yekuchenjerera, ine chete 'yakakosha' yakaiswa pamusoro payo.
Mapurisa akasunga vanhu vana zvine chekuita nekuputika kweSvondo, panguva iyo mutyairi wetekisi akaputika mudziyo wekuputika kunze. Liverpool Chipatara chemadzimai. Mubhomba ndiye chete akafa.